Nidaamka masaf Hacks Autowebinar - Masaf Of The Day
Nidaamka masaf Hacks Autowebinar
Mid ka mid ah qarsoon ugu weyn ku saabsan samaynaya autowebinars waxaa la xaqiiqada ah in aad bixinayso set isku mid aasaasiga ah ee macluumaadka si koox dad ah in ka qaadi doonaa wax walba oo aad ku tidhi kaliya siyaabo aad u kala duwan ka qabashada.
Iyo sida oo kale, waxay codsan doonaa waxa ay barteen in ay xeelado ganacsi.
Marka aad ay ogaadaan in, aad is tusay doonaa trick ugu weyn in la iibiyo masaf wanaagsan hacks autowebinar.
Waxaa oo dhan ku yimaado hoos si aad script.
Maskaxda ku hay in script adag waxaa mashquuliya oo u hadla si baahida gaarka ah ee dadka u doortay inay ka qayb on aqoontaada.
Hadda, la hacks masaf waxaad isticmaali kartaa qaabka ay u dhisaan baxay million dublad dollar iibinta alaabta info,
barnaamijka tababarka, adeegyada maxaliga ah iyo ka badan…